Fanamarihana momba ny finday, ny smartwatches, ny takelaka, ny kojakoja, ny fampiharana, ny lalao, ... | Androidsis
Ny tsikera na fanadihadiana dia natao hahafahana mamaritra raha toa ka mifanaraka amin'ny andrasana ny vokatra iray ary mendrika ny vidiana. Amin'ity sokajy ity dia ho hitantsika ny karazana famerenana vokatra, avy amin'ny finday avo lenta na takelaka misy Android ho toy ny rafitra miasa ary koa vokatra maro hafa avy amin'ny marika mifandraika amin'ity tontolo ity toa ny fakan-tsary, mpandahateny, headphone, mpandahateny na smartwatches. Karazan-vokatra rehetra.
Noho ireo fanamarihana ireo dia ho fantatrao raha misy fitaovana Android izay mahaliana anao, dia ho azonao atao raha ilaina ny mividy. Amin'ity sokajy Androidsis ity dia ho hitanao ny hevitra tsara indrindra sy feno indrindra. Izay rehetra ilainao ho fantatra momba ireo fitaovana ireo dia hita ato amin'ity sokajy ity.
Huawei FreeBuds 4, ny safidy tsara indrindra amin'ny headphones TWS misokatra [Analysis]
ny Miguel Hernandez hace 1 herinandro .
Ny sofina tsy misy tariby TWS dia mihombo hatrany amin'ny tsena, hany ka ny zavatra sarotra dia ny mahita ...
Super EQ S1, famakafakana, fahombiazana ary vidiny
ny Rafa Rodríguez Ballesteros hace Herinandro 2 .
Miverina izahay miaraka amin'ny famakafakana amin'ny headset Bluetooth tsy misy tariby. Fa amin'ity indray mitoraka ity izahay dia maodely mitondra endrika "over…".
Fanaraha-maso fakan-tsary momba ny Huawei P50 Pro, ny farany avo lenta an'ny orinasa [DxOMark Analysis]
ny Aaron Rivas hace Herinandro 3 .
Ny Huawei P50 Pro no finday avo lenta indrindra amin'ny marika amin'izao fotoana izao, ary iray amin'ireo ambony ...
Vacos Cam IR, fakantsary fanaraha-maso miaraka amin'ny fizakan-tena
ny Rafa Rodríguez Ballesteros hace Herinandro 3 .
Androany dia miresaka aminao indray izahay momba ny fakantsary fanaraha-maso ho an'ny trano na orinasa. Safidy matotra ho ...
Realme GT Master Edition, famolavolana Japoney haminavina fahombiazana iray [Famakafakana]
ny Miguel Hernandez hace Herinandro 4 .
Raha manaraka anay tsy tapaka ianao dia ho fantatrao fa vao haingana izahay no nandinika ny Realme GT, fitaovana iray avy amin'ny orinasa aziatika maniry ...
X5 Play, famakafakana, fampisehoana ary ny vidiny
ny Rafa Rodríguez Ballesteros hace 1 volana .
Androany ao amin'ny Androidsis dia manana vokatra izay be fangatahana izahay tato ho ato. Smartwatch feno tanteraka miaraka amin'ny endri-javatra avo lenta. Fa…
HAYLOU RS3, famakafakana, fampisehoana ary ny vidiny
ny Rafa Rodríguez Ballesteros hace 2 volana .
Miverina amin'ny Androidsis izahay miaraka amin'ny famerenana mahaliana raha iray amin'ireo te-hamoaka smartwatch amin'ity fahavaratra ity ianao. Raha te hanome ...
Redmi Buds 3 Pro, famakafakana, vidiny ary hevitra
Izahay indray mandeha dia mitondra anao ny famerenana headphones tsy misy tariby. Fa amin'ity indray mitoraka ity dia tsy miatrika olana hafa fotsiny isika, anio dia ...
Realme GT - fitsapana fakantsary lalina
ny Miguel Hernandez hace 3 volana .
Realme dia nanao batemy an'ity Realme GT ity izay nasehonay anao tamin'ny nanombohany azy ho «mpamono sainam-pirenena», ...
Realme GT, te handrava ny vavahadin'ny avo [Review]
Araka ny fantatrao tsara, niara-niasa tamin'ny Realme izahay hatramin'ny nahatongavany tamin'ny fomba ofisialy tany Eropa, rehefa nanatrika ny hetsika voalohany ...
ZMI PurPods Pro famerenana, fampisehoana ary ny vidiny
ny Rafa Rodríguez Ballesteros hace 3 volana .
Avereno indray, famerenana an-telefaona amin'ny Androidsis. Amin'ity indray mitoraka ity dia manana tokana tena miavaka izahay, ny ZMI PurPods Pro….
Tolotra manokana Chuwi Hi9 AIR, fihenam-bidy 40 Euros ho an'ny Andro voalohany amin'ny alàlan'ny tapakila mifatotra. (Mety ho an'ny mpanjifa Prime sy Non-Prime)
Avereno jerena ny Xiaomi Mi Band 3
Famerenana horonan-tsary miampy sary an'i Energy Music BOX 5+ Fanontana YALL
Famerenana ny Leagoo S8, terminal iray tena feno amin'ny 100 euro mahery
Unboxing + Review + Energy Phone Pro 3 Fanomezana (Fanomezana Iraisam-pirenena)
Fampiharana fanadiovana Android tsara izay hahagaga anao
Moto G5S Plus, notsapainay ho anao izany
LeEco LETV S3, fanadihadiana sy hevitra
Ulefone Gemini Pro famerenana
Famerenana lalina ny Nokia 3
Doogee MIX amin'ny lalina miampy fanomezana iraisam-pirenena!
Chuwi Hi10 Pro, fanadihadiana ary hevitra
Famerenana lalina ny BQ Aquaris X
Vahaolana amin'ny olan'ny bateria Samsung Galaxy S6 Edge Plus
Moto Z Play, fanadihadiana ary hevitra
Meizu M5, fanadihadiana sy hevitra
Fandinihana Ulefone Armor, manodidina ny latsaky ny € 150